Booliiska Kiiniya oo si naxdinleh uga hadley dilkii iyo kufsigii Ismahaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Booliiska Kiiniya oo si naxdinleh uga hadley dilkii iyo kufsigii Ismahaan
Booliiska dalkaasi Kiiniya ayaa war ka soo saaray dilkii iyo kufsigii foosha xumaa ee lagula kacay Ismahaan C/salaan oo usbuucii hore meydkeeda laga helay gaari kuwa deg dega ah oo u waday masjid u dhow halka ay deganayd. aan ka fogeyn halka,ay deganayd. Dilka ayaa hore loogu qabtey edadeed oo ay la joogtey.
Dhacdadaan fiosha xun oo la mida tii lagu sameeyay Caasha Aadan Ilyaas oo aan welli cid rasmiya loo qaban ayaa anfariir ku ridey dadka Somalida dhamaan.
Sida uu ku waramay booliiska dalkaasi waxay sheegeen in Ismahaan la kufsaday dhowr jeer inta aan la dilin. Waxay kale oo ay la nooleyd qoys balaaran oo isugu jira wiilal haween iyo caruur ayna dhici karto in iyada si gaara loo fara xuneeyay. Booliiska ayaa ku eedaynaya kufsiga eedadeed oo ay leeyihiin iyadaa ogolaatey.
Booliska baaraya kiiska gabadhan ku jirtey dugsiga dhexe ayaa xaqiijay in dilka iyo kufsiga loo qabtey ilaa sadex kale oo iyaguna haweena. Waxa aad looga naxay in jirkeeda markii dambana aashito lagu shubey oo guriga layska dhex dhigtey ilaa afar cisho. Caruurta guriga degan oo urta u qaadan waayay ayaa u sheegay jaarkooda, kadibna jaarkii ayaa wargeliyay maamulka.
Ismahaan ayaa isniintii la aasay halka dhamaan daskii loo qabtey dilkeeda la soo taahi doono maxkamad lana ciqaabi doono sida,ay sheegeen booliisku.welli mu jirta gaadhigii gurmadka ahaa ee lagu qabtey.
C /llaahi Warmooge